तरकारी खेतीले फेरिएको मुहार::– Nepal's Digital Paper
१महिनावारी भएका बेला पेट दुख्छ ? यी खाने कुरा खानुहोस्
२कुखुराको मासु खानेहरुलाई दु:खद खबर !
३लगातार बढेको गर्मीले जनजीवन प्रभावित
४सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि पु¥याउन जोड
५वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी शक्ति मिलेर अघि बढ्नुपर्छ नेता नेपाल
६कालीगण्डकीको पानी लिफ्ट गरेर तानसेन ल्याइँदै
७स्वास्थ्य मन्त्री उद्घाटन
८तरकारी बोक्ने निशान गाडी पल्टिँदा एकको मृत्यु, छ घाइते
९पोखरा विमानस्थलको निर्माण नरोकिने मन्त्री अधिकारीको भनाइ
१०‘नेपालमा पुरुष नर्स पनि आवश्यक’
११हात्तीको आक्रमणबाट महिलाको मृत्यु
१२लगातारको पहिरोले मुग्लिनमा यात्रुलाई सास्ती
१३नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बालमैत्री घोषणामा आशंका
१४एसइई नतिजामा भूल : हजारौ विद्यार्थीको नतिजा फेरियो
१५यस्तो बन्दैछ सलमान खानको नयाँ घर
प्रकाशित मिति :बुधबार, जेष्ठ ३०, २०७५ Wednesday, June 13th, 2018
काठमाडौँ – दुई वर्षअघिसम्म मकवानपुर जिल्ला भीमफेदी गाउँपालिका नामटारकी चन्द्रकला रुम्बा घरायसी कामबाहेक अशिक्षाले गर्दा अरु कामधन्दा गर्न नजान्ने भएकाले घरमै सीमित हुनुहुन्थ्यो । छोरीले पढ्न हुँदैन भन्ने सामाजिक अन्धविश्वास र घरको आर्थिक अवस्थाले गर्दा उहाँको विद्यालय जाने चाहना कहिल्यै पूरा भएन ।
सानो उमेरमै बिहे भएर अर्काको घरमा गएपछि त मेलापात, घरधन्दा र चुलोचौकामा नै उहाँको आधा जीवन बित्यो । आफ्नो पर्याप्त जग्गा नभएकाले अर्काको जग्गा अधियाँमा कमाएर र ज्याला मजदुरीबाट घरको गुजारा चलाउन उहाँलाई हम्मेहम्मे पर्दथ्यो ।
रातपछि बिहान भएजस्तै उनको जीवनमा पनि घाम उदायो । दुई वर्षअघिसम्म गरिब परिवारकी गृहिणीको रुपमा रहेकी उहाँको एक्कासी परिचय सफल महिला व्यवसायीको रुपमा फैलिएको छ । ४२ वर्षीया चन्द्रकलाको जीवनले विस्तारै कोल्टे फेर्न थाल्यो ।
घर उही, परिवार सदस्य उति नै, तर फेरिंदो जीवन । वल्लोपल्लो गाउँमा समेत उहाँलाई नचिन्ने कमै होलान् । सङ्घर्षशील महिलाको रुपमा चिनिनुहुन्छ उहाँ । दुई छोरा, दुई छोरी र श्रीमान गरी छ जनाको परिवार उहाँकै पाखुरामा निर्भर रहेको छ । श्रीमान शारिरीकरुपमा अशक्त भएकाले घर व्यवहारको जिम्मेवारी पनि उहाँकै काँधमा रहेको छ ।
गाउँघरमा अरुले तरकारी खेतीबाट पैसा कमाएको देखेर उहाँलाई पनि तरकारी खेती गर्ने विचार आयो । जग्गाको नाममा भएको आठ कठ्ठामा सानो खरको छानो भएको घर बनाएर बसेको थियो उहाँको परिवार । तरकारी लगाउने प्रसस्त बारी नभए पनि उहाँले अरुको अधियाँ कमाएर खेती सुरु गर्नुभएको छ ।
थोरै जग्गामा लगाएको तरकारीले सुरुमै राम्रो आम्दानी दिएपछि उहाँलाई व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्ने जाँगर बढ्यो । कमाएको आधा साहूलाई दिनुपर्दथ्यो र समयअनुसार विउबिजन नपाउँदा कहिलेकाहीँ त उहाँलाई खेती छोडेर अन्य व्यवसाय गर्ने विचार पनि नआएको होइन । तर त्यस्तो व्यवसाय गर्न उहाँसँग पूँजी नभएको र कसैले दुई÷चार हजार रुपैयाँ पनि नपत्याउने भएकाले तरकारी खेतीमै निरन्तर लागिरहनु भएको छ ।
निरन्तरको साधनाले सफलता दिन्छ भने झैं २०१४ अप्रिलपछि उनको तरकारी खेतीले फस्टाउने अवसर पायो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम, विश्व वातावरण कोष, साना अनुदान कार्यक्रमको आर्थिक सहयोग र एमडिसी नेपालको प्राविधिक सहयोगमा गाउँमा भू–क्षय रोकथामद्वारा जलवायु समानुकूलनमा समुदायको दिगो जीविकोपार्जन कार्यक्रम लागू भएपछि उहाँलाई ढुङ्गा खोज्दा देवता मिलेजस्तै भयो । यसले उहाँलाई पुनः तरकारी खेतीमै लाग्ने प्रेरणा मिल्यो ।
कार्यक्रमले विभिन्न समूहमा जैविक वातावरणमैत्री ताजा तरकारी उत्पादनसम्बन्धी तालिम दिएपछि उहाँमा तरकारी खेतीबाटै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढ्यो । उहाँलाई लाग्यो अब बल्ल मेरो जिन्दगीले अनेक घुम्ती र खोँचहरु पार गर्दै मूल सडकमा आइपुग्यो । तालिमले उहाँले कसरी तरकारी उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापन गर्नुुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि उहाँले व्यावसायिक ढङ्गबाट तरकारी खेती गर्ने निधो गर्नुभयो ।
सुरुमा आप्mनो आठ कठ्ठा र अरुको अधिँया चार कठ्ठा जमिन लिएर तरकारी खेती गर्न सुरु गर्नुभएको थियो । बजारमा अरुले उत्पादन गरेको तरकारी आउनुअघि नै आफ्नो तरकारी लैजान सके बढी मूल्य पाइने भएकाले आफूले १२ कठ्ठा जग्गामै बेमौसमी तरकारीहरु लगाउने थालेको यहाँ बताउनुहुन्छ । एकै सिजनमा सबै खर्च कटाएर उहाँले रु. एक लाख ५० हजार खुद नाफा कमाउन सफल एको चन्द्रकलाको भनाइ छ ।
खेतबारीमा मल पनि हुने र दुध तथा मासु बिक्री गरेर आम्दानी पनि गर्न सकिने भएकाले अहिले उहाँले दुई÷तीनवटा भँैसी र केही बाख्रा पनि पाल्न थाल्नुभएको छ । प्राङ्गारिक मल राखेको तरकारीको मूल्य बढी पाउने र रासायनिक मल किन्ने पैसा पनि बचत हुने देखी भैँसी र बाखाको मललाई भकारो सुधार गरी सुधारिएको गोठेमल बनाएको उहाँ भन्नुहुन्छ ।
गाई भैँसीको पिसाब सङ्कलन गरी अर्गानिक तरकारी खेती गर्ने उहाँको लगन, मिहेनतको गाउँमा सबैले प्रशंसा गर्न थालेका छन् । उहाँको तरकारी अर्गानिक भएकाले मानिसहरु खोजीखोजी घरमै आएर पनि धेरै पैसा तिरेर किन्ने गरेकाले अब उहाँलाई बजारमा बेच्न जानुपर्ने समस्या छैन् । मूल्य पनि राम्रो पाएपछि उहाँको आर्थिक हैसियत बढ्न गएको छ ।
हिजोसम्म अर्काको जगगा अधियाँ गरेर जेनतेन घर परिवार चलाउँदै आएकी चन्द्रकला अहिले समाजमा हुनेखानेमा चिनिनुहुन्छ । दुई छोरी र दुई छोरालाई राम्रो क्याम्पस र स्कुल पढाउन सक्षम उहाँलाई अब घरखर्चमा कुनै समस्या छैन् । पहिले खरको छाप्रोमा गुजारा गर्दै आएकामा उहाँले अहिले पक्की घर बनाउनुभएको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘ज्ञान र सीप पाएपछि आफ्नो मेहनतले अघि बढ्छु ।’’ यस वर्ष तरकारी खेतीबाट तीन लाख रुपैयाँ कमाउने उहाँको योजना छ । पहिले त पैसा कमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो तर अहिले यहीँ बसेर मेहनत साथ खेती गरियो भने विदेशको भन्दा बढी कमाइ गर्न सकिने रहेछ भन्ने अनुभव उहाँको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री उद्घाटन
पक्की पुलको शिलान्यास
नगरसभा नीति तथा कार्यक्रमः पूर्वाधार विकासमा बढी जोड
विदेशमा तीन छोरा गुमाएका दम्पतीको अठोट ‘सन्तानलाई अब जानै दिन्नौँ’
स्थानीय सरकार बालविवाह रोक्ने अभियानमा
१ कुखुराको मासु खानेहरुलाई दु:खद खबर !
२ लगातार बढेको गर्मीले जनजीवन प्रभावित
३ सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि पु¥याउन जोड
४ वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी शक्ति मिलेर अघि बढ्नुपर्छ नेता नेपाल
५ कालीगण्डकीको पानी लिफ्ट गरेर तानसेन ल्याइँदै
६ स्वास्थ्य मन्त्री उद्घाटन
७ तरकारी बोक्ने निशान गाडी पल्टिँदा एकको मृत्यु, छ घाइते
८ पोखरा विमानस्थलको निर्माण नरोकिने मन्त्री अधिकारीको भनाइ
१ यस्तो बन्दैछ सलमान खानको नयाँ घर
२ किन नगर्ने भए सलोनले ‘ब्रेकअप’
३ ‘कायरा’ कुनै पनि दृश्य सार्वजनिक नहोस् भन्ने आर्यन र साम्राज्ञीको बाहिरियो एस्तो भिडियो
४ अनमोलको देशका ४ स्थानमाकन्सर्ट, हेलिकप्टरबाट स्टेजमा ल्याण्ड गर्ने
५ अञ्जली अधिकारीले ‘मुख चुच्चो पारेर सेल्फी खिच्दै, तीज गीतमा (हेर्नुस भिडियो)
६ रणवीर दीपिकाको बिहे इटलीमा कि बैंगलौरमा ?
७ चर्चित भारतीय गायिका संजीवनीले फेरी दोहोरीमै तहल्का पिट्ने गीत गाईन (हेर्नुस भिडियो)
८ मिस नेपाल यूएसका लागि श्रेष्ठ फोटोग्राफरमा नियुक्त
१ कालीगण्डकीको पानी लिफ्ट गरेर तानसेन ल्याइँदै
२ ऊर्जा, परराष्ट्र र गृहको बजेटमाथि छलफल
३ अक्सिजन उद्योग निर्माणमा रोक
४ सुखीपुर नगपालिकाद्वारा रु ४४ करोड बजेट पारित
५ जहदा गाउँपालिकाको रु ४२ करोडको बजेट
६ त्रिशूली–गल्छी आयोजनामा चिनियाँ लगानी
७ बिक्न छाड्यो अलैँचीको बिरुवा
८ किम्बु खेती गर्ने किसान घटे